Maan la Heshiinno Shabaab! – Qalinka: Yuusuf Garaad Cumar | Cabays.com
Maan la Heshiinno Shabaab! – Qalinka: Yuusuf Garaad Cumar
April 4, 2019 - Written by Maxamad Khadar
Dowladdii ay fashilaaddeeda iyo maqnaashaheedu eeddaas geysteen, marka ay hadda soo naaxdo, ee ay billowdo in ay isku daydo in ay amniga sugto caddaaladna raadiso, sax ma tahay in ay isla dhallinyaradii ay gabtay ay ku tilmaanto dembiilayaal? Weliba dembiilayaa ay tahay in wadajir loo laayo ama la soo qabqabto si mid-mid loogu toogto?
Waxay iigu muuqataa intii dhallinyarada Soomaaliyeed ee Shabaab ku jira laga horgeyn lahaa dhallinyaro Soomaaliyeed oo ciidan ah, oo markaa ay dhallinyarada Soomaaliyeed isku dhammaan lahayd, in ay waajib tahay in laga fekero in la helo hab loo kala badbaadin karo dhallinyarada.
Waxaan ognahay in isu geyn dhallinyarada Soomaaliyeed ay ahaan karto cudud Soomaaliyeed, ayada oo isla markaasna la xaqiijinayo in khatarta Shabaab laga badbaado amaba dhammaanteed la soo afjaro.
Dulucda qoraalkeygu waa in aan xakameyno carada ay nagu khasbayaan wiilasha is qarxinaya ee isku dhex qarxinaya shacabka. Laynaya dad ehelkooda ah oo aan waxba galabsan welibana aanay aqoon.